KIA , SPORTAGE , 2017 ,YGN – Super Seven Stars
KIA , SPORTAGE , 2017 ,YGN
Buy For 47 000$
Grade Full Options
Warranty Expiry Date 04 . September .2022
Insurance Expiry Date 22 . September . 2018
KIA Sportage 2017 Model ဖြစ်ပြီး Engine power 2.0 L / Diesel /6Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade အမျိုးအစား5ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် …
Sportage 2017 ၏နောက်မီးခွက်မှာဆိုလျှင်ဖြင့် ရှေ့ Generation များနှင့်မတူဘဲ Tail light မီးသုံးတန်းဖြင့်အလှဆင်ထားသည်မှာ Last Generation ဖြစ်ကြောင်းသိသာထင်ရှားစေပါသည်
. Driver Seats နှင့် Front Passenger Seats တို့သည် Heated and Ventilated Seats များဖြစ်သောကြောင့်အပူအအေးကိုစိတ်တိုင်းကျထိန်းညှိနိုင်ပါသည်။
. KIA Sportage ၏ နောက်ကြည့်မှန်မှာ Electric chromic mirror ဖြစ်သောကြောင့် ညအချိန်ကားမောင်း နေစဉ် မိမိယာဉ်နောက်မှကား၏ မီးကြောင့် ဖြစ်စေသော မျက်စီစူးရှမှုကို ကာကွယ်ရန် နောက်ကြည့်မှန် အားမှေးမှိန်၍ အလင်းပြန်မှုအားနည်စေခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ သို့သော် ဘက်ဂီယာထိုးလျှင် နောက်ရှိမြင်ကွင်းအား ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်စေရန် ထိုစနစ်အားရပ်တန့်ပြီး ပုံမှန်အလင်းပြန်မှုအားပြန်လည် ရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
. High Way လမ်းမများပေါ်တွင်မောင်းနှင်ရာ၌ အမြန်နုန်းကိုလိုသလိုသတ်မှတ်ပေးထားပြီးမောင်းနှင်နိုင်သည့် Cruise Control System ပါဝင်သည့်အတွက် အရှိန်လွန်မောင်းနှင်မိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုသည့်အပြင် ယာဉ်မောင်းမှလီဗာအချိန်ပြည့် နင်းထားစရာမလိုသောကြောင့် သက်သောင့်သက်သာဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
ယာဉ်မတော်တဆအန္တရာယ်များမှကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် Driver Airbag / Passenger Airbag/ Front Side Airbag (Left)/ Front Side Airbag(Right)/ Curtain Airbag (Left)/ Curtain Airbag(Right) စုစုပေါင်း Airbags (6) လုံးပါဝင်ပါရှိပါသည်။
KIA Sportage Sound System မှာ JBL Sound System with Clari-Fi technology အသုံးပြုထားပြီး Speaker (8) လုံးပါဝင်ပါသည်။ New Technology ဖြစ်သောကြောင့် မူရင်း အသံသွင်းထားသည့်အတိုင်းအသံကို (90%)ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ နားဆင်နိုင်ပါသည်။
KIA Sportage ၏ကားရှေ့မှန် Wind Screen မှာနေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိရောက်မှု သက်သာစေပြီး ကားအတွင်းသို့အပူဝင်ရောက်မှု လျော့ချပေးသည့် အတွက် မောင်းနှင်သူ နှင့် စီးနှင်းလိုက်ပါသူများကို နေရောင်ခြည်မှ ပါဝင်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ထိတွေ့မှု ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
. Rain Sensor သည်ကား၏ ရှေ့လေကာမှန်ကြီးအတွင်းဘက်တွင်ရှိပြီး မိုးရွာသောအချိန်တွင် မှန်ပေါ်သို့ကျလာသော မိုးရေစက်အနည်းအများပေါ်မူတည်၍အာရုံခံပြီး wiper ကို အနှေးအမြန် အလိုအလျှောက်အလုပ်လုပ်စေသဖြင့် Wiper ခလုပ်ဖွင့်စရာမလိုတော့ဘဲ အလုပ်ရူပ်မှုမှသက်သာ စေပြီး ကားမောင်းရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။
. Blind Spot Detection စနစ်ဟာဆိုရင် မမြင်နိုင်သော နေရာများမှရောက်ရှ်ိလာမည့် အရာများကို အာရုံခံပေးသောစနစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဘေးနှင့်အ နောက်ဘက်တို့မှမိမိယာဉ်ကိုကျော်တက်လာစဉ်အတွင်း နောက်ကြည့်ဘက်မှန်မှမိမိတို့သိရှိ စေသောကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းကင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
20% Down Payment 11,092
Monthly Payment For 1 Year 3,359
Monthly Payment For2Years 1,788
20 % Down Payment 11,092
Monthly Payment For3Years 1,267
30% Down Payment 15,698
30 % Down Payment 15,698